SmCo lasibatry - China Ningbo Sine
SmCo avoakan'ireo andriamby, dia taranaka faharoa eto an-tany tsy fahita firy maharitra avoakan'ireo andriamby, dia avo-fahafahana andriamby maharitra vita amin'ny Sm, Co, Fe sy ny soritry singa vy. Ankoatra ny mari-pana Max miasa ny 300 ℃, dia manana fanoherana ny harafesiny miavaka sy oxidation. Noho izany, dia mety ho ampiasaina ao amin'ny orinasa sy ny habaka aeronautic aomng ny hafa. Manufactures SmCo5 sy Sm2Co17 avoakan'ireo andriamby, amin'ny endriny isan-karazany. Maro ny mpanjifa mitaky naoty YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, sns Machining sy tolerances isika ...
SmCo avoakan'ireo andriamby, dia taranaka faharoa eto an-tany tsy fahita firy maharitra avoakan'ireo andriamby , dia avo-fahafahana andriamby maharitra vita amin'ny Sm, Co, Fe sy ny soritry singa vy. Ankoatra ny mari-pana Max miasa ny 300 ℃, dia manana fanoherana ny harafesiny miavaka sy oxidation. Noho izany, dia mety ho ampiasaina ao amin'ny orinasa sy ny habaka aeronautic aomng ny hafa.
Manufactures SmCo5 sy Sm2Co17 avoakan'ireo andriamby, amin'ny endriny isan-karazany. Maro ny mpanjifa mitaky naoty YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, etc.
Machining sy ny tolerances
Izahay amin'ny lafiny hahatratra habeny sy ny fandeferana amin'ny nanapaka na amin'ny Super-mitoto vary abrasives. Samarium Cobalt (SmCo) tsy azo nitoto amin'ny mahazatra ary atsofony izay mamadika na mihaohao dingana, ary tsy maintsy ho machined alohan'ny magnetized izy ireo. Ankoatra izany, lehibe na sarotra magnetized fivoriambe matetika mialoha ny fivoriana. Standard tolerances for samarium Cobalt avoakan'ireo andriamby, dia +/-. 005 "ho an'ny lafiny tany. Boloky hazo SmCo isika lasibatry amin'ny andian-tsoratra, peratra sy ny kapila amin'ny endrika isan-karazany ny habeny sy ny naoty, ary ampy fitaovana tsara isika mba hamokarana ny habe sy ny fandeferana izay mitaky.
1: 5 firaka ara-nofo
1: 5 manolotra 16 MGOe (angovo vokatra) ka hatramin'ny 22 MGOe ary no mandrafitra ny 50% eo ho eo amin'ny 50% samarium sy kobalta. Ny 1: 5 andian-dahatsoratra manana mari-pana ambony indrindra kevitra fandidiana ny 250 ° C. SmCo 1: 5 avoakan'ireo andriamby, mitaky hery an-tsaha ambany noho ny fitaovana mba magnetize 2:17. Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety ho fitaovana 1:15 magnetized amin'ny maro baony, raha toa ny magnetizing fixture est disponible.
2:17 firaka ara-nofo
2:17 manolotra 24 MGOe ny 32 MGOe ary izany dia ahitana ny tokony ho 25% samarium, 5% varahina, 18% vy, 2% hafnium na zirconium, sy ny sisa ho kobalta. Ny 2:17 andiana manana mari-pana ambony indrindra fandidiana ny 350 ° C. Special naoty ny 2:17 dia misy izay afaka miasa na dia ambony kokoa ny hafanana. 2:17 SmCo tena avo dia mitaky magnetizing saha, ary maro tsato-kazo magnetization dia tsy azo atao.
Open ary maka Technical Data ny SmCo avoakan'ireo andriamby,
Mandritra ny herinandro andriamby Property
SmCo avoakan'ireo andriamby, VS Sintered Neodymium avoakan'ireo andriamby,
Mandritra ny herinandro andriamby Property:
Maximum miasa hafanan'ny: 250-350 ° C
Maximum Energy Product: (Bhmax) (15-35 MGOe)
Maximum Miasa Temperature: (Temp.Tw) 250-350
Induction faneriterena Force: (Hcb) 4-12 (Koe )
Residual fanindrahindram: Br 0.8-1.2 (T)
azo ahitsy hafanan'ny coefficient ny residual fanindrahindram (Br) -0.04 - -0,01
2. Nice hafanana Stability
3. Noho ny tsy fahazakana ny vidin'ny kobalta, ny vidiny dia lafo sy mora miovaova be
Production Fomba samarium Cobalt maharitra Magnet:
Powder dingana ny Fandrosoana → → → Sintering andriamby fananana fitiliana → → fanapahana vokatra vita
samarium kobalta fitaovana no ampiasaina matetika eo ambanin'ny toe-javatra magnetized Firenena Mikambana, miaraka amin'ny diamondra halain'ny kodiarana sy mando tsara Fitotoana Vary, izay ilaina. Noho ny ambany ignition mari-pana, samarium kobalta tsy tokony ho maina tanteraka. Kely fotsiny kilalaon'afo na voasakantsakan'ny famokarana herinaratra ao dia afaka mora foana ny afo nahatonga an'ilay bibidia, miaraka amin'ny hafanana faran'izay avo, izay sarotra ny mifehy.
samarium kobalta avoakan'ireo andriamby, dia malemy. Mba hiarovana ny masonao-katsaram-panahy, ny rantsantanana sy ny tena rehefa mifandray amin'izy ireo.
High fampisehoana Motors
ny fahasamihafana misy eo SmCo avoakan'ireo andriamby, sy ny Sintered NdFeB avoakan'ireo andriamby, indrindra ahitana ireto zavatra manaraka ireto:
1. andriamby hery
Neodymium maharitra andriamby dia mahery noho SmCo andriamby andriamby amin'ny hery.
(Bh) Max ny sintered NdFeB dia niakatra ho any 53MGOe, raha ny (bh) Max ny SmCo zavatra dia 32MGOe.
SmCo fitaovana mahery mba hanoherana demagnetization noho ny NdFeb ara-nofo.
2. High hafanana fanoherana
NdFeB dia tsy ambony toy ny mari-pana ambony SmCo amin'ny fanoherana. Ny mari-pana ambony indrindra ny NdFeB miasa dia 200 ℃ sy ny an'i SmCo dia hatramin'ny 350 ℃.
3. harafesiny fanoherana
NdFeB avoakan'ireo andriamby, dia tsy dia tsara mba hanoherana oxidation sy ny harafesiny. Amin'ny ankapobeny izy ireo mba ho voaro amin'ny voapetaka na vacuum fonosana. Common karazana coating ahitana ny zinc, nikela, epoxy sy ny hafa. SmCo avoakan'ireo andriamby, dia tsy rusting tsy voapetaka.
4. endriny, fanodinana sy mivory
NdFeb sy SmCo dia samy marefo ara-nofo, ka tsy azo vokarina amin'ny alalan'ny fanapahana tsotra fanodinana.
Ny fomba fikarakarana ankapobeny dia tariby-electrode fanapahana sy ny diamondra kodia fanapahana. Ary ny endriky ny ireo producible avoakan'ireo andriamby, dia voafetra. Sarotra loatra ny endriny dia tsy hamolavola. Somary niteny izy, SmCo zavatra marefo kokoa ary mora kokoa handrava. Noho izany dia aoka ho malina tsara amin'ny mivory sy mampiasa SmCo lasibatry.
Taona vitsy lasa izay, ny vidin'ny SmCo avoakan'ireo andriamby, dia roa na mihoatra noho ny an'i NdFeB avoakan'ireo andriamby.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny vidin'ny NdFeB efa nitsangana be dia be noho ny firenena ny fepetra faneriterena-tany tsy fahita firy ao amin'ny fitrandrahana. Raha tsorina dia, mahazatra NdFeB avoakan'ireo andriamby, dia mora kokoa noho ny samarium kobalta.
Previous: AlNiCo avoakan'ireo andriamby,
Manaraka: Sintered Neodymium avoakan'ireo andriamby,
vata fampangatsiahana Magnet
SMCO avoakan'ireo andriamby
Tiny avoakan'ireo andriamby,